“Ninkii dilay walaalkay ayaan la saaxiibay”
Saacado yar ka hor inta aysan farriintaas argagaxa galisay soo dhicin, waxay u dirtay farriin ay ku dhaheysay: “Runtii waan kuu xiisay walaal. Alla rabiyoow. maxay sidan u dhaceysaa”.
Amber Leinweber aad bay uga calool xumaatay xaaladda ay ku jirto Ruth
Markii ay Amber ogaatay xaaladda ay ku jirto Ruth, waxay ku tiri: “xilliga aad doontid farriin waad kusoo diri kartaa telefoonkan”, waxayna intaas ku dartay: “Waan ogahay inaynaan is aqoonin, wax dhib ahna uma arko inaad qoraallo kusoo dirtid lambarkeyga”.
Ruth waxay tiri: “Walaalkey wuxuu geeriyooday ka dib markii uu si xad dhaaf ah u isticmaalay daroogada loo yaqaanno heroin bishii Maarso. Wuxuu muddo 12 sano ah la dhibaatoonayay la qabsiga daroogada, inkastoo uu saddexdii bilood ee ugu dambeysay isticmaalinna, mar qura ayuu ku laabtay oo uu iska badiyay, wuuna geeriyooday isagoo xilligaas 37 jir ahaa”.
“Runtii aad baan isugu dhaweyn, saaxiibo gaar ah ayaana ahayn oo waliba maalin walba farriimo isku dira. haddii aan kaftan hayo waan u sheegi jiray islamarkiiba, haddii aan doonayo inaan la hadlana mararka qaar waxaan u diri jiray farriin qoraaleed”.